iOS Archives - Page2of9- Saturngod
What New in Xcode 9
Posted on Updated June 21, 2017 June 21, 2017 by saturngod
Xcode9Beta version ထွက်လာပါပြီ။ Xcode9မှာ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားသလဲဆိုတော့ All new editor Xcode မှာ code editor အသစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ အရင်ထက် ပိုပြီးမြန်လာပါတယ်။ သဘောကျဆုံးကတော့ Markdown support ပါဝင်လာပါတယ်။ Font size ကို ⌘ + နှင့် ⌘ – နဲ့ ပြောင်းလို့ ရပါတယ်။ File size ဘယ်လောက်ကြီးကြီး scroll မြန်မြန်လုပ်လို့ရပါတယ်။ သဘောကျတာကတော့ အဖွင့် အပိတ်တွေကို သိရအောင် ⌘ click နဲ့ ရတယ်။ Action ကို သွားမလား function ခွဲထုတ် မလား စတာတွေ ပါလာတယ်။ […]
iOS Development ဘယ်လို လေ့လာမလဲ ?
Posted on Updated May 25, 2017 February 1, 2017 by saturngod
အမြဲတန်းလိုလို ပြောနေကျ Topic ဖြစ်ပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက် barcamp မှာတော့ Swift ထွက်လာသည့် အတွက် အချို့ အကြောင်းအရာတွေ ပြောင်းပြီးတော့ ပြောဖြစ်တယ်။ ဘာတွေ လိုအပ်လဲ ? iOS Development လုပ်ဖို့ လိုအပ်တာတွေကတော့ Mac OS iPhone , iPad (Optional) Apple Developer Account Apple Developer Account Free For Development $99/year for App Store Mac OS ရှိရင် ရပါပြီ။ Development လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Macbook pro က ပိုကောင်းပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ iPhone သို့မဟုတ် iPad လိုအပ်တယ်။ […]
Invalid Bundle For dylib Search Path
Posted on Updated October 22, 2016 by saturngod
Ornagai ကို ဒီတစ်ခေါက် App store ပေါ်ကို Swift3ပြောင်းပြီး Xcode 8 နဲ့ တင်တော့ Invalid Bundle – One or more dynamic libraries that are referenced by your app are not present in the dylib search path. ဆိုပြီး ပြနေတယ်။ နည်းမျိုးစုံ ရှာပြီး စမ်းပေမယ့် မရဘူး။ တချို့တွေကတော့ framework ကျန်ခဲ့လို့ဖြစ်မယ်။ otool -L [filename] နဲ့ စစ်ကြည့်လို့ ပြောတယ်။ @rpath နဲ့ ဖြစ်ရမယ်လို့ ဆိုပေမယ့် စစ်ကြည့်တော့လည်း […]
Ornagai 2.6 (iOS)
Posted on Updated February 12, 2016 by saturngod
Ornagai 2.6 ကို Apple App Store မှာ download ချနိုင်ပါပြီ။ အခု version မှာတော့ today widget ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ How to use Today Widget Today widget ကို အသုံးပြုဖို့ အတွက် Notification bar ကို အပေါ်ကနေ ဆွဲချလိုက်ပါ။ Today tab ကို သွားပြီးတော့ အောက်ဆုံးက Edit ကို နှိပ်ပါ။ Ornagai ဘေးနားက အစိမ်းရောင် အပေါင်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Done လုပ်ပါ။ ပြီးရင် ကြိုက်တဲ့ နေရာက Text ကို copy လုပ်ပြီး Notification […]
Ornagai Apple Watch App
Posted on Updated October 13, 2015 October 13, 2015 by saturngod
Ornagai version 2.5.8 ကို update တင်လိုက်တာနဲ့ Apple Watch သမားတွေ အတွက် Ornagai ကို နာရီမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ဖုန်း ဖွင့်စရာ မလိုပဲ ornagai ကို အသံနဲ့ ပြောပြီးတော့ dictionary မှာ search လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လက်နဲ့ ရိုက်ထည့်ရတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မိမိ ရဲ့ အသံထွက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး Siri ရဲ့ Dictation က ထွက်လာတဲ့ စာလုံး ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။